Cultural Leonesa 1-7 Real Madrid: Marco Asensio & Alvaro Morata Oo Min Laba Gool Dhaliyay Ka Dhaliyay Kulankii Copa Del Rey, Xili Los Blancos Ay Si Xun U Soo Xasuuqday Kooxda Cultural Leonesa
Thursday October 27, 2016 - 10:40:59 in Sports by Super Admin
Real Madrid ayaa si xun u soo xasuuqday kooxda Cultural Leonesa ee kulankii Copa Del rey waxayna Los Blancos guul wayn ku furtay Copa Del Rey, Marco Asensio iyo Alvaro Morata oo kulankan ku soo bilawday shaxda Zinedine Zidane ayaa min laba gool ka dh
Real Madrid ayaa si xun u soo xasuuqday kooxda Cultural Leonesa ee kulankii Copa Del rey waxayna Los Blancos guul wayn ku furtay Copa Del Rey, Marco Asensio iyo Alvaro Morata oo kulankan ku soo bilawday shaxda Zinedine Zidane ayaa min laba gool ka dhaliyay halka Nacho iyo da'yarka Mariano Diaz ay min hal gool dhaliyeen wuxuuna goolka kale ahaa mid iska dhalis ah.
Real Madrid ayaa si xun u soo xasuuqday kooxda Cultural Leonesa ee kulankii Copa Del rey waxayna Los Blancos guul wayn ku furtay Copa Del Rey, Marco Asensio iyo Alvaro Morata oo kulankan ku soo bilawday shaxda Zinedine Zidane ayaa min laba gool ka dhaliyay halka Nacho iyo da’yarka Mariano Diaz ay min hal gool dhaliyeen wuxuuna goolka kale ahaa mid iska dhalis ah.
Real Madrid ayaa 7:1 ku soo xaaqday kooxda Cultural Leonesa iyada oo goolka madiga ahaa uu Cultural u dhaliyayBenjamín Martínez. Waxaa markale cadadaatay sida Marco Asensiyo, Alvaro Morata iyo Lucas Vazguez uga qaab ciyaareed fiican yihiin saddexda xidig ee Ronaldo, Benzema iyo Bale oo kulankan la nasiyay.
Real Madrid ayaa shaqadii ugu badnayd soo qabsatay ka hor kulanka Santiago Bernabue ka dhici doona lugta labaad ee wareega afraad ee Copa Del Rey-ga. Zidane ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee Copa Del Rey ku bilawday guul wayn, waxayna u muuqataa in haddaba Real Madrid ay ka soo gudubtay wareega afraad ee Copa Del Rey.
Kulanka lugta labaad ee Copa Del Rey ee ay Los Blancos la ciyaari doonto kooxda Cultural ayaa dhici doonNovember 30. Laakiin waxaa cajiib noqday in Marco Asenio uu goolal ka dhaliyay kulan kasta oo uu markii ugu horaysay Real Madrid uga soo muuqday, sida UEFA Super Cupka, La Ligaha, Champions Leaque-ga iyo Copa Del Rey. Real Madrid ayaa kooxda Cultural ku soo xasuuqday 7:1.